"Waxaa i kufsaday madaxweynihii hore ee Gambia Yaxye Jaamac" - Hoyga Wararka
Home World News	“Waxaa i kufsaday madaxweynihii hore ee Gambia Yaxye Jaamac”
Gabadh 23 jir ah oo hadda ka hor ku guuleysatay tartanka qurux Gambia ayaa sheegtay in sannadkii 2015-kii uu kufsaday madaxweynihii hore ee dalkaas Yaxye Jaamac.
Fatu Jallow ayaa hay’adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch u sheegtay waxa ku dhacay, iyada oo hadda ku nool dalka Canada.
BBC-da oo isku dayday in ay la xiriirto Yaxya oo hadda ku nool dalka Equatorial Guinea ayaa afhayeen u hadlay uu beeniyay jiritaanka arrintan.
“Haddii aan nahay xisbi iyo dadka reer Gambia waxaan ka daalnay sheegashooyinka aan runta ahay ee laga warinayo madaxweynaheenii hore Mr Jaamac” ayuu yiri Cusmaan Rambo Jatta oo ah afhayeen Yaxye Jaamac.
Gabadha eedeymaha jeedisay in Yaxye Jaamac oo hadda 54 jir ah ay maxkamad la korto si ay caddaalad u hesho.
“Aad baan isugu dayay in aan qariyo sheekada, oo aan masoxo, balse waan samayn waayay” ayay tiri Ms Jallow.
Gabadhan ayaa sidoo kale sheegtay in ay doonayso in ay qiraal ka hor samayso guddiga runta iyo dib u heshiisiinta Gambia TRRC, kaas oo uu sameeyay madaxweyne Adama Barroow markii uu doorashada ku guuleystay sannadkii 2016-kii.
Guddigan ayaa baaraya dacatiyadii dhacay intii uu madaxweyne Yaxye xukumayay dalkaas, oo ay xitaa ka mid tahay dilal la sheegay in dad loo gaystay sifo sharciga hareer marsan.
Jallow ayaa sheegtay in ay 18 jir ah markii ay la kulmaysay Yaxye Jaamac waxyar uun kadib markii ay ku guuleysatay tartanka quruxda gabdhaha, kulankaas oo ka dhacay magaalada Banjul ee caasimadda ah.
Waxa ay intaas ku dartay in bilihii hore uu u dhaqmayay sidii aabaheed oo kale, oo uu siiyay lacag iyo haddiyado, isaga oo xitaa biyo galiyay guriga qoyska gabadhan.
Balse mar dambe ayuu casho ku casuumay, wuxuuna usoo bandhigay guur, waana ay diiday wax allaale wixii xod xodosho ahaa.
Mar kale ayaa lagu casuumay madaxtooyada, waxaa la geeyay guriga madaxweynaha, halkaas oo Yaxye Jaamac uu dharbaaxay, ku durey irbad suuxin ah, kadibna kufsaday.
Dhacdadaasi kadib, Ms Jallow ayaa u qaxday dalka Canada, halkaas oo ay ka heshey magangalyo.
Human Rights Watch ayaa sheegtay in Yaxye uu lahaa hab uu ku waxyeeleeyo dumarka, waxaana ka mid ahayd in uu mushaar u qoro dumarka uu u weeydaarto. Qaarkood ayaa laga shaqaalaysiiyay madaxtooyada, waxaana loogu magacdaray ‘Dumarka Hab maamuuska”.
BBC-da ma xaqiijin karto eedeymaha, balse qof magaciisa qariyay oo ka tirsanaa dowladda Gambia ayaa sheegay in uu ogyahay in “waxyaabo aan haboonayn” ay ka dhacayeen madaxtooyada, shaqaalaha hab maamuuskana ay intooda badan ahaayeen dumar, ujeedkana ahaa in lagu qanciyo hiwaayadaha madaxweynaha.
Waxa uu xitaa xusuustaa gabadhan oo ku sugan madaxtooyada saacado saqda dhexe ah.
Waxaa kale oo jira dumar kale oo sheegay in sidaas lagu sameeyay, mid ka mid ahna waxa ay sheegtay in dumarka qaar ay sharaf u arkeen marka uu madaxweynaha ugu yeero dhanka sariirta.
Shirkad Dalka India ah ayaa lacag badan ku...
Turkiga Oo Ka Digey Safarada France Rabshado Ka...
Ciidanka Myanmar oo lagu amrey in siyaasadda Ka...
Wararka maanta Suuriya 18 Askari oo Suuriya ah...
Trump Oo Dalkiisa ku Eedeeyay Inuu Xumeeyay Xidhiidhkii...